प्राथमिकता – Himalaya Television
दोस्रो प्राथमिकतामा परेकालाई फागुन २ गतेदेखि खोप लगाउने तयारी
२९ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई फागुन २ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले फागुन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई...
पहिलो चरणमा एक लाख ८४ हजारले खोप लगाए, दोस्रो चरणको प्राथमिकता कसलाई ?
२५ माघ २०७७ काठमाडौं । पहिलो चरणको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप एक लाख ८४ हजार ८५७ जनाले लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार भारत सरकारले उपलब्ध गराएको खोप ‘कोभिशिल्ड’ देशभरका २०१ खोप...
२२ माघ २०७७ काठमाडौं । पहिलो चरणबाट बचेको कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप नै प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा लगाउने तयारी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजार जनालाई लगाउन योजना बनाएको खोप...
भारतले १० लाख डोज खोप दिने, पहिलो प्राथमिकतामा को ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ माघ २०७७ काठमाडौं । भारतले नेपाललाई अनुदानमा १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप दिने भएको छ । खोपको पहिलो खेप भोलि नै आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । स्वास्थमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यो खोप प्राथमिकता...